Ny fitsaboana Folk | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ny fitsaboana Folk
Ny mahasoa, ary na dia ratsy aza ny physalis
Maro no nandre momba ny kolontsaina toy ny physalis. Boky mena tsy mahazatra, lamatra, izay miafina ny voan'ny zavamaniry - ny zavatra voalohany tadidinao. raha miresaka momba ny physalis, dia an'ny fianakaviana avaratra. Io zavamaniry isan-taona io dia mahatratra hatramin'ny 50-100 cm ny haavony, mamokatra voninkazo vita amin'ny voniny na loko fotsy, izay mitombo avy amin'ny familiana ny ravina ary ny voninkazo amin'ny volana Aogositra.
Inona no fampiasana ny digitalis ho an'ny fahasalaman'ny olombelona?
Digitalis (Digitális) dia ahitra ao amin'ny fianakaviana plantain. Nalefa tany Mediterane izy, hita any Azia sy Afrika Avaratra. Ny firafitry ny simika amin'ny digitalis Ny firafitry ny digitalis dia feno ranon-javatra mifandray amin'ny organika, izay mifangaro glycoside miaraka amin'ny kômisia. Ny zavamaniry dia ahitana fitambarana dimy toy izany: digitoxigenin, gitoksigenin, gitloksigenin, digoxigenin ary diginigenin.
Olana amin'ny fitsaboana amin'ny aromatika plectrantus: fampiasana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fanoherana
Plequantrantus mamy (sporiferous, mint) dia herintaona maharitra ny fianakaviana Yasnotkovyh. Tany Rosia, tonga avy any Afrika Atsimo, ary nizara tany Aostralia. Aromatika Plektranthus: Ny fampiasana akora simika Ny singa ao amin'ny zavamaniry, glycosides, proteinina, voambolan'ny karbôgres ary eny amin'ny alkaloïda dia azo zaraina.
Ny fanasitranana ny akanjom-bary, noho ny zavamaniry marefo
Ny ankamaroantsika dia mahazatra ny akanjom-bary toy ny felam-bary mamony. Na izany aza, vitsy ny olona mahafantatra momba ny zava-mahadomelina momba ny zava-mahadomelina, izay nohavaozina maina tsy voavolavolan'ny hazo mitovitovy, mitovy amin'ny endritsoratra kely misy kapa. Hita fa ny fanafody any amin'ny firenena maro dia efa nampiasa ny akanjo fanafody ho fanafody.
Famoronana sy fampiasana oregano
Oregano dia zavamaniry isan-karazany manerantany izay miely manerana izao tontolo izao. Ny fandefasana azy dia mandrakotra ny habetsan'ny gladi, ny ala, ny ala ary ny faritra mena. Any amin'ny firenena maromaro, oregano dia mamboly ho amin'ny tanjona fampiharana bebe kokoa amin'ny toetra samihafa. Ankoatra ny fangatahana an'io zavamaniry io, ny tsy fisehony dia miavaka amin'ny karazana herbye maromaro ao anatina tandindona mahavariana amin'ny trano ilaina.
Potentilla fotsy: singa mahasoa, fampiasana sy fanoherana
Potentilla fotsy dia plant tsy dia fahita firy. Hita any anaty ala fotsiny izy io. Ity zavamaniry ity dia an'ny fianakaviana Rosy, Genus Potentilla. Ao amin'ny vahoaka dia antsoina hoe pyatipalnik, pyatipal, pyatipe rindrina. Ahitra avo 8 ka hatramin'ny 25 santimetatra ny herin'ny potenta. Ny fotony dia matevina, mainty volomparasy.
Inona no ilaina ny parsley, ny fananganana sy ny fanasitranana ny zavamaniry?
Parsley dia zavamaniry bitika kely iray izay mpikambana ao amin'ny fianakaviana Umbrella. Ny kolontsa dia manana felana fotsy na mavo-mavo ary ravina avo roa heny na telo. Ny pesta dia homena ny morontsirak'i Mediterane. Niparitaka nanerana an'i Eoropa ny Parsley, ankoatra an'i Scandinavia.
Ny fampiasana ranomandry: ny soa sy ny fahasalaman'ny fahasalamana
Fihetsiketsehana - maharitra isan-taona miaraka amina fakan-kery matanjaka, izay nohanina ho toy ny fambolena marefo. Ny ravina dia zaridaina malaza, ny raviny dia ampiasaina amin'ny fitehirizana sy fanangonana vokatra ho an'ny ririnina. Mampiasà zavamaniry iray ary ho an'ny tanjona medikaly. Ny akora simika sy ny kodiarana kavalie Inona no vitan'ny vitaminina ao anaty ranomandry?
Ny toetra mampiavaka ny holatra fotsy
Ny ceps dia angamba ny lasibatra tsara indrindra ho an'ny mpangalatra holatra maro. Azo atao tsara ny manonona ny anaran'ny mpanjakazaka holatra, satria tsy manintona ny endrika ivelany izy io, fa amin'ny toetra avo lenta ihany koa, izay mahatonga azy ho zava-manitra ho an'ny sakafo maro. Ankoatra izany, ny holatra fotsy dia misy karazana mahasoa maro, izay horesahina etsy ambany.
Ny boletus mahasoa
Ireo ala voajanahary dia atolotra antsika mandritra ny vanim-potoan'ny lohataona amin'ny fararano sy lohataona ho fanomezana amin'ny endrika holatra tsara tarehy - dibera. Tena malaza amin'ny mpankafy "fihazakazakazakazaka mangina" izy ireo noho ny tsiro tsara sy ny vokatra tsara. Ny holatra Fungi Maslyata dia nahazo ny anarany noho ny cap capy oily.
Ny mahasoa ho an'ny lehilahy mainty hoditra, ny fampiasana cumin sy ny solika ao amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Ny legioma marevaka dia misy esters ary zavatra hafa mampangotraka. Manolotra kambana mainty izahay. Ny kômpàkely mainty dia ivon-toeram-panambadiana biennial, ny tsy manan-danja ny toetra mahasoa azy, na dia misy aza ny fikajiana fampiasana. Ny karazana zava-mahadoman'ny kômpà mainty dia fantatra hatramin'ny taloha. Fantatrao ve?
Fanamboaran-javatra mahasoa sy fanasitranana kansera
I Chervil dia fantatra tamin'ny toetoetrantsika hatrizay hatrizay ary niantso azy ireo izany snacks, karbel, kupyr. Nampiasaina tamin'ny sakafo izy io ary toy ny fanafody. Amin'izao, mbola manohy mampiasa ny fanafody nentim-paharazana sy ny fikarakarana ny zavamaniry, saingy ireo toetra mahasoa azony dia nahita fampiharana amin'ny sehatra hafa amin'ny fiainan'olombelona. Chervil (kupyr): Ny akora simika sy ny sandan'ny zavamaniry Chervil dia hita matetika any amin'ireo zavamaniry hafa.
Ny endriky ny fitsaboana sy ny fanandramana amin'ny salohia (salvia) nutmeg
Sage dia herotra izay nalaza noho ireo toeram-pitsaboana efa hatramin'ny fahiny. Hippocrates dia nanamarika ireo toetra mahasoa azony tao amin'ny asa sorany. Tsy voavonjy ny moustach moustique sy ny fitsaboana maoderina. Ny fanafody avy amin'io herisetra io dia manasitrana ny fatran'ny hoditra sy ny tracteur respiratory. Ao amin'ny cosmetology, dia mazàna no ampiasaina ho mpitsabo mpanohitra sy manelingelina.
Benefits of herbal medicines: properties of mage and contraindications
Ny anaran'ilay zavamaniry malaza amin'ny teny latinina dia mitovitovy amin'ny salvia "salvere", midika izany - ho salama. Ilay Hippocrates lehibe dia niresaka momba ny salvia tamin'ny fanajana "zary masina", ary ny Grika fahiny dia nanambara fa ilay ranomandry dia zavamaniry izay mandresy ny fahafatesana. Salvia (sage) dia manana karazany maro, ary tsy mora ny manavaka izay lazaina ho fanafody.
Chokeberry fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fanoherana
Aronia dia mainty hoditra, ala maitso matevina ihany koa - hazo lava na hazo misy menaka mamy siramamy, tena ilaina amin'ny fananany. Ny laza malaza an'i Chernoplodka, na dia teo aza ny zava-mahavariana mahavariana azy, dia vao haingana vao haingana, efa ho zato taona lasa fotsiny izay, ary nanon-tena an'io zavamaniry io i Ivan Michurin.
Rowan mena mahasoa sy fanoherana
Ny royanina maitso, ny soa ho an'ny fahasalamana, ny fanoherana sy ny voka-dratsy azo avy amin'ny fampiasana azy dia fantatra tamin'ny olombelona nandritra ny arivo taona. Ny toetrany tsy manam-paharoa amin'ny lavenona dia manome azy toerana manokana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, cooking sy cosmetology. Manintona ny saina i Red Rowan ary mankafy be ny lazany.
Ilaina sy mampidi-doza ny voankazo
Zavona - zavamaniry iray avy amin'ny karazana Citrus. Azo inoana fa nipoitra tampoka izany, ary nandritra ny fotoana lavalava dia nipoitra ho karazana iray izy io, ary avy eo dia natokana ho azy ary nanjary kolontsaina zaridaina malaza (any atsimo na atsimo atsinanan'i Azia). Ankehitriny, tsy fantatra io zavamaniry io amin'ny toetry ny fitomboany.
Fananana fanasitranana tantely tantely, fomba fampiharana sy famahanana ny tantely avy amin'ny ririnina
Ny tantely tandindonin-doza, izay fantatra hatramin'ny nahazoana tombontsoa manokana, dia iray amin'ireo tsiambaraton'ny lava-pon'ny Caucasus. Lasa marika famantarana ny fahasalamana sy ny hery ara-batana izy. Ankehitriny, maro ireo olona miverina amin'ny fototra, mampiasa ity vokatra ity ho fanasitranana. Fantatrao ve? Ao Etazonia, ny tantely tantely dia mamindra popcorn sy cocktails amin'ny fomba mahazatra.
Ledum dia mivadika tsiranoka: fampiasana, fananana ara-pahasalamana ary fanoherana
Marsh Labrador tea - zavamaniry misy poizina misy poizina izay misy ny fianakaviana hère. Ledum dia mitombo any Eoropa, Amerika Avaratra ary Azia. Ny zavamaniry dia manana rafitra boribory matevina ary mahatratra haavo 120 santimetatra. Ny tsiron'ireo kirihitr'ala rosemary dia mitovy amin'ny fofona fofona.
Ny laurel mahasoa: ny akora simika sy ny fananan-tany amin'ny ravina boribory
Ao amin'ny lakozia tsirairay dia misy kitapom-bary misy ravina maina. Ny ahafantarana malaza dia manana karazana fampiharana be dia be. Ny ravina felana dia manana zava-mahadomelina manan-danja ary afaka manampy amin'ny fiatrehana aretina sy olana ara-pahasalamana, saingy amin'ny fampiasana toy izany dia ilaina ny mifantoka amin'ny fanoherana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fitsaboana Folk